Iprofayile yenkampani - Shandong Yuqiang Hardware Products Co., Ltd.
Shandong Yuqiang Hardware Products Co., Ltd. yasekwa ngo-2003 Ifunyanwa Chengxi Industrial Park, esiXekweni City, kwiPhondo Shandong, kunye nekomkhulu layo yokuthengisa ibekwe e Qingdao. Lishishini lobuchwephesha obuphezulu elidibanisa i-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa komnyango wokwakha kunye nehardware yewindows.
Iimveliso eziphambili zi-aluminium-zeplastikhi ezingeniswe ngaphakathi, ngaphakathi nangaphandle kwe-casement, ikhethini lokuvula udonga lwewindows; nekudodobalisa ilangatye nekudodobalisa inkqubo yehardware, isixhobo sokuvula sombane, izixhobo zokuphefumla, njl.
Senze uphando kunye nophuhliso, uyilo, ukuvelisa ukungunda, ukulahla, ukunyathela, unyango lomphezulu kunye nendibano njengenkqubo yokuvelisa enye.
sinawo amandla emveliso ngaphezu 1.5 yezigidi iiseti (iziqwenga). Umzi-mveliso ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-50,000; Inani elipheleleyo labasebenzi kwinkampani lingaphezulu kwama-350, kubo abangaphezulu kwama-90 ngabaphathi nabasebenzi bezobugcisa.
Iimveliso zethu zisetyenziswa kwiiprojekthi zobunjineli ezingaphezu kwe-172, kwaye zigcinile ubudlelwane obulungileyo kunye nobude bexesha elingaphezulu kwama-200 ekontraka yokwakha enjengeBeijing Zhong jian ji ye, Qingdao Lu Cheng, Qingdao Port Authority, China Sinopec, China Power, Huan qiu Group, Beihai Jiandui, njl, nobuchwepheshe obuphambili beTekhnoloji, umgangatho wemveliso ogqwesileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa, ephumelele ukuthembela kunye nokudumisa abathengi.
Izinto eziluncedo zeemveliso ze-Hardware ze-Yuqiang:
Ukuphuculwa kwezinto zokwenza izinto, kuphindwe kabini umthamo wokuthwala